Seddax Yahuud ah oo lagu gowracay Daanta Galbeed iyo Ninkii dilay oo la toogtay.. [Akhri dar-daarnkiisa].
Saturday July 22, 2017 - 21:33:32 in Wararka by Super Admin
Seddax ka mid ah Yahuudda xoogga lagu dejiyay dhulka Filastiin ayaa la dilay, mid Afaraadna wuu dhaawacmay markii Nin Muslim ah oo Filastiini ah uu howl-gal ka fuliyay tuulada "Nebi Saalix" ee bariga magaalada Ramallah.
Warbaahinta Yahuudda waxay sheegeen in la toogtay Ninka weerarkaas fuliyay, kaas oo lagu sheegay inuu ahaa Wiil Filastiini ah oo 19 jir ah, laguna magacaabayay Cumar Al-Cabd.
Ciidamo badan oo ka tirsan Meliteriga Yahuudda ayaa la geeyay goobta uu weerarku ka dhacay, waxaa sidoo kale goobtaasi gaaray gawaarida gurmadka deg degga iyo diyaarad nooca Helicopterka ah.
Wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganeysa war kasoo baxay Meliteriga Yahuudda ayaa sheegtay in Ninka weerarka qaaday inuu u dhacay guri ay dad Yahuud ah daganaayeen oo ku yaalla bariga magaalada Ramallah, islamarkaana uu halkaas dil iyo dhaawac ka geystay.
Wiilka dhallinyarada ah ee weerarka fuliyay ayaa ka hor howl-galkiisa waxa uu bartiisa facebook-ga ku qoray sababta ku kalliftay inuu weerarkan qaado, isagoona tilmaamay inuu ugu gar gaarayo Masjidka Al-Aqsa ee Yahuudda ay xadgudubyada kula kacayaan.
Urrurada Muqaawamada Filastiiniyiinta oo ay ka mid tahay Xarakada Xamaas ayaa soo dhaweeyay howl-galkaasi, waxaana uu sheegay inuu fal celin dabiici ah u yahay xadgudubyada ay Yahuuddu kula kacayaan Shacabka reer Filastiin.
Howl-galka lagu gowracay Seddaxda ruuxa ee Yahuudda waxa uu imaanaya iyadoo maalintii shalay ay magaalada Al-Qudus ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo loogu nusreynayo Masjidka Al-Aqsa, waxaana dibadbaxyadaasi ay sababeen dhimashada Seddax qofood oo Filastiiniyiin ah, kuwaas oo ay toogteen Ciidamada Yahuudda.